ပြောင်းစိုက်ပျိုးရာတွင် သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်း မပြည့်မီ၍ ပြောင်းမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီမှ တောင်သူ? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့မှ တောင်သူများစိုက်ပျိုးထားသော ပြောင်း စိုက်ခင်းများ၌ သတ်မှတ်စံချိန်စံ နှုန်းများအတိုင်း အကျိုးခံစားမှုမရရှိသဖြင့် ပြောင်းမျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးခဲ့ သောကုမ္ပဏီမှ နစ်နာထောက်ပံ့ ကြေးများပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီ က အောင်လံမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
”သီးနှံမျိုးစေ့တွေကို ကုမ္ပဏီ က ဖြန့်ပေးနေတာကြာပါပြီ။ အခုနှစ်က စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျတာ ရယ်၊ မိုးရွာတဲ့ရက်က နောက်ကျတာရယ်၊ ပြောင်းလဲလာတဲ့ရာသီ ဥတုအခြေအနေတွေကြောင့် သီးနှံအများစုက စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုက သတ်မှတ်စံနှုန်းတွေ မပြည့်မီတာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှူး ဦးဌေးမောင် က ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ပြောင်းမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးသော တောင်သူ ၁ဝဝ ကျော်၏ ဧက ၇ဝဝ ကျော်တွင် ပြောင်းများအဖူးအ ရောင်မမှန်ခြင်း၊ အပင်အတက်များ ထွက်ရှိခြင်းနှင့်ပြောင်းအထွက်နှုန်း ကျခြင်းတို့ကြောင့် သတ်မှတ်စံနှုန်း များနှင့်မကိုက်ညီဖြစ်ကာ ပြောင်း ဖူးများရောင်းချရာတွင် ဈေးမရခြင်း၊ များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် တောင်သူများမှ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု ကြောင့် ပြောင်းမျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောကုမ္ပဏီမှ တောင်သူများအား နစ်နာထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် ပြန် လည်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြောင်းမျိုးစေ့ ကြောင့် နစ်နာခဲ့သည့် အောင်လံမြို့ နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၂၃ ရွာမှ တောင်သူ ၁ဝဝ ကျော်၏ ပြောင်းဖူး မျိုးစေ့ဘူး ၁ဝ၅ဝ အတွက် တစ် ဘူးလျှင်ကျပ် ၁၅ဝဝဝ ဖြင့် စုစု ပေါင်းကျပ် ၁၅၇၅ဝဝဝဝ အား ကုမ္ပဏီမှ တစ်ဦးချင်းပြန်လည် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးတွင် သင်္ကြန်ကာလ ၂၄ နာရီ ဆေးကုသပေးနိုင်ရန် လူအင်အား၊ ရောဂါရှ?
ရက်ရောတဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေကြောင့် ယူနီဆက်ဖ်ရဲ့ ဂုဏ်ပြုကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့ ဟယ်ရီ